RHCSA Exam Tipps - Ahoana ny fandehanana RHCSA Exam? - Sekoly teknolojia
RHCSA Exam Tipps - Ahoana ny fandehanana RHCSA Exam?
Torohevitra momba ny RHCSA Exam
Ny RHCSA no fanombanana ny fampahalalam-baovao ao amin'ny Red Hat Enterprise Linux sy ny fahaiza-manao izay andrana ny fanantenana amin'ny orinasam-pandraharahana. Rehefa mahazo ny mari-pahaizana ianao, dia ho afaka ny hiasa amin'ny toe-draharaha ao amin'ny Red Hat Enterprise Linux ianao. Mijoroa fotsiny ary tadiavo torohevitra vitsivitsy izay hanampy anao amin'ny fanamarinana mari-pahaizana RHCSA.
Torohevitra farany indrindra momba ny Exam RHCSA
Alaharo ho tsy misy tsikombakomba: Ho anareo ny handalo fanadinana dia tsy azo ihodivirana ny fampiharana. Izany no zava-misy amin'ny RHCSA. Satria ity dia fanadinana an-tanana ity, tsy afaka hianatra ireo hevitra amin'ny fo ianao. Mifidiana PC ianao izao ary manomboha amin'ny alàlan'ny asa atao, amin'ny fotoana rehetra fotsiny, raha vao manomboka manadino ny torolàlana. Ilaina ny mamantatra izay tena ilainao hatao.
Fitantanam-potoana: Ny fanadinana dia tena maharitra ela ary mety tsy manam-potoana akaiky. Aoka hatao ao amin'ny asanao ary hiezaka ny hamita ny andraikitra tsy dia ilaina loatra amin'ny voalohany amin'ny tanjona amin'ny fampitomboana ny fahamendrehanao. Azonao atao ny mandehandeha amin'izay tsapanao. Ataovy ao an-tsaina fa ny ezaka ataon'izy ireo dia handany fotoana iray amin'ny vanim-potoanao amin'ny fomba toy izany mba hampanahy anao.
Tsidiho ny tanjona: Raha mpandrindra tsara ianao, dia mety hahita ny ampahany amin'ny toerana misy azy. Na izany aza, dia tsy matoky intsony ianao, raha ny amin'ny sarotra kokoa. Tadidio ny fanadinam-pahaizana mitovy amin'ny isan'ireo manampahaizana manokana efa nipoitra noho ny tsy fahombiazan'izy ireo hahatakatra ny tanjona.
Esory ny faritra rehetra: Misy karazam-pandaharan'ireo lohahevitra tafiditra ao anatin'ny fanadinana ary mety tsy ho fantatrao ny zava-drehetra. Mety efa nofenoin'ny governemanta nandritra ny fotoana lava be ianao, mila mangataka bebe kokoa ny fanadinana Systems Administratoran'ny Red Hat Certified. Ny mpitantana iray dia mifantoka amin'ny isa voatendry efa voafaritra ary mety tsy hanana fahafahana any amin'ny faritany faran'izay lavitra. Raha mikasa ny hanao fanadinana, dia mitaky posy mba handraketana ny lohahevitra rehetra ary hahatakatra ny fanatsarana vao haingana.
Ny tena mampanahy dia ny fanadinana dia tsy mora araka ny eritreritrao. Ny andraikitra dia manery anao hanao asa marina izay mangataka fangatahana fianarana sy fahaizana mandaitra. Noho izany, miankina amin'ny fomba amam-panao ankapobeny mba hiantohana fa tsy manalavitra ny foto-kevitra ianao.
Red Hat IT Sign In (SSO) Miankina amin'ny Virtualization Virtual Red Hat
Ny fomba mahomby indrindra ho an'ny RHCE Certified